खोटाङका आयुष १५ दिनदेखि अमेरिकामा बेपत्ता « Channel Np
खोटाङका आयुष १५ दिनदेखि अमेरिकामा बेपत्ता
प्रकाशित मिति : Thursday, July 11th, 2019 at 7:19 PM
विद्यार्थी भिसामा गएका खोटाङका आयुश दाहाल अमेरिकाको मेरिल्याण्ड राज्यबाट हराएका हुन् । मेरिल्याण्डको ग्वेन ओक्समा उनीसँगै बस्दै आएका साथी सम्मान वैद्यले बताएअनुसार आयुश विगत १५ दिनदेखि कोठामा फर्केका छैनन् ।
४र ५ दिनअघि आयुशलाई फोनमा सम्पर्क गर्दा उनको फोन एक अपरिचित व्यक्तिले उठाएको थियो। ती अपरिचित व्यक्तिले आफूले फोन बाल्टीमोर हार्बरको बेन्चमा सुतिरहेको एक व्यक्तिबाट राती चोरेको बताएका थिए । तर, त्यसपछि सम्पर्क गर्दा भने फोन स्विच अफ गरेको साथी सम्मानले बताए।
आयुशले आफूले योर्क रोडको सेल ग्यास स्टेसनमा काम पाएको र उतै बस्नेसमेत साथी सम्मानलाई बताएका थिए । तर, उनको खोजीमा निरन्तर लागिपरेका अर्का साथी अनुप खनालकाअनुसार उक्त ग्यास स्टेसनमा आयुश भेटिएका छैनन् ।
अहिले मेरिल्याण्ड डिस्ट्रिक्ट ८ का डेलिगेट ह्यारी भण्डारीको अगुवाईमा प्रहरीलाई जानकारी गराएर औपचारिक रुपमा बेपत्ता आयुशको खोजीकार्य भैरहेको छ । हाल भक्तपुरमा बस्दै आएका आयुशका परिवारले अमेरिकामा रहेका नेपाली संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसमक्ष आफ्‍नो बेपत्ता छोराको खोजी गरिदिन अनुरोध गरेका छन् ।
प्राय गरेर भाग्यमानी मानिसहरूसग मात्र हुने गर्छन यस्ता कुराहरू,कतै तपाईसग पनि छन कि?
प्रचण्डको यस्तो उद्घोष होला त यस्तो ?
जनप्रतिनिधिकै निर्देशनमा युवा कुटिए, हेर्नुहोस हालत कस्तो छ
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खारेज गर्न माग गर्दै यहाँ सम्म भयो ,के खारेज होला त ?
भोटे कुकुरको मुल्य आकासियो , लौ हेनर्सहोस एउटा कुकुरको मुल्य कति पर्छ ?
सरकारी कर्मचारीलाई खुसिको खबर
निको नहुने रोग पनि जाती पार्छन यि बाबु छोराले (पढ्नुहोस एकपटक रोग पालेर बस्नु पर्दैन )
राष्ट्रपतीको पर्खाइमा रहेका सरोज खनाललाई अपमान, ट्वाइलेटमा लगेर राखियो
मरेको मानिस बचाउन सकिने भएपछि नाम दर्ता गराउनेको ओईरो
असार ३० देखि साउन ५ गतेसम्मको राशिफल
यी ६ कुरा जसले मान्छेलाई भाग्यमानी बनाउछ, तपाईसँग छ कि छैन ?